ဒီနေ့မေလ ၃ ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကျဆင်းနေတယ်လို့ သတင်းထောက်တွေက ပြောပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကို တားမြစ်တာ၊ သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲမှုတွေကြားက သတင်းထောက်တွေ ခက်ခက်ခဲခဲ သတင်းရယူနေကြရတဲ့ အခြေအနေ ရန်ကုန်က ပေးပို့ထားတာကို မခင်ဖြူထွေးပြောပြပါမယ်။
ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်မှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အခြေခံအုတ်မြစ်တခုဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အမေရိကန်သံရုံးအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ သတင်းထောက် ၈၀ မှာ ၄၀ ကျော်က ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံနေရပြီး တရားစွဲဆိုခံနေရတယ်လို့ သံတမာန်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀ နီးပါးရဲ့ စုပေါင်းကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သတင်းသမားတွေအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ အင်တာနက်ကန့်သတ်မှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်မှုကို စတင်ပေးဖို့ သတင်းအချက်အလက်ပေးနေတဲ့ မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေ လိုင်စင်ရုတ်သိမ်းခံရ၊ ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာ ဖွေခံနေရတာ၊ မီဒီယာလုပ်ငန်းငယ်အများစု ပိတ်ဖို့ ဖိအားပေးခံရတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အာမခံချက်ရှိရှိပေးဖို့ ၊ သတင်းသမားတွေ လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ကိုအာမခံချက်ပေးဖို့ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေက စစ်ကောင်စီကို တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး ၃ လကျော်လာချိန်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ရပ်လိုက်တဲ့ သတင်းလုပ်ငန်း ၆ ခုရှိပါပြီ။ မဇ္ဈိမ၊ DVB၊7Days၊ Myanmar Now နဲ့ ခေတ်သစ် မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကို အာဏာသိမ်းပြီး မကြာခင်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့် ပိတ်သိမ်းခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် မြစ်ကြီးနားသတင်းဂျာနယ်တိုက်ကိုလည်း လုပ်ငန်းထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မီဒီယာတခုခု၊ နည်းပညာတရပ်ရပ်သုံးပြီး သတင်း မထုတ်ပြန်ရဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ အစောပိုင်းက အပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သတင်းမီဒီယာတချို့ကတော့ အွန်လိုင်းနဲ့ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြုပြီး သတင်းတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြနေကြပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် သတင်းသမားတွေကို လုံခြုံရေးတွေဖက်က ပစ်မှတ်ထားလာတဲ့အတွက် အရင်ကလို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် သတင်းရိုက်ကူး ရယူနိုင်ဖို့ မလွယ်တဲ့အပြင် လက်ကိုင် တယ်လီဖုန်းနဲ့တောင် ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ အဆင်မပြေဘူးလို့ သတင်းထောက်တွေက ပြောပါတယ်။
အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေကြားမှာ သတင်းယူနေကြရတယ်လို့ လတ်တလောကပဲ ထုတ်ဝေ ခွင့်ပိတ်ခံရတဲ့ မြစ်ကြီးနား သတင်းဂျာနယ်က သတင်းထောက်တယောက်က ပြောပါတယ်။
"လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ဆိုတာက ဒါကဒုတိယအပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ အခုအရေးကြီး တာက ဒီအပိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ ခုကသတင်းထောက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ သူတို့မိသားစုလုံခြုံရေးရယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ နော်။ ခုကဘယ်လောက်ဆိုးနေလဲဆို ကျနော်တို့သတင်းထောက်တွေကို ထောင်ခြောက်ဆင်ဖမ်းတာ၊ အိမ်ထိအရပ် ဝတ်တွေနဲ့ လာဆွဲတာ. သူတို့ကိုမတွေ့ရင်မိသားစုဝင်တွေကိုဆွဲသွားတာ တွေက လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောစရာမလို တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ"
သူတို့ရဲ့မြစ်ကြီးနား သတင်းဂျာနယ်တိုက် အပါအဝင် သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ် ဖိနှိပ်နေတာက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို မီးမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
" အခုလိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာကိုလည်း မတရားဘူးလို့ ကျနော်တို့ခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ဟာမမျှတဘူး ကျနော်တို့ကို ဘာသတိပေးချက်မှမပေးဘူး။ ချက်ချင်းဘဲ ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်တာဘဲပို့တယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်ဘဲ ပိတ်သိမ်း ကျနော်တို့က ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ သူတို့ကျနော်တို့ကို ကြောက်လို့ကျနော်တို့ ကိုပိတ်တယ်လို့ထင်တယ်။ အဲအတွက်ကျနော်တို့ ဂုဏ်ယူတယ် "
လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့်ကို စစ်ကောင်စီက မပိတ်ခင်ရက်ပိုင်းကလည်း မြစ်ကြီးနားဂျာနယ်က သတင်းထောက် ၃ ဦးကို အတင်းအကျပ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေကို တခြားသတင်းထောက်တွေလိုဘဲ တပ်မတော်ပြိုကွဲအောင် လှုံ့ဆော်မှု၊ လုပ်ဆောင်မှုတို့ ပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့ တရားစွဲထားပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတဲ့အတွက် သတင်းထောက်အများအပြားဟာ ဆက်လက်သတင်းရယူရေးသားဖို့အတွက် လျှို့ဝှက်လုပ်ကိုင် နေရပါတယ်။ ပြည်သူတွေကြား သွားရောက် သတင်းရယူတဲ့အခါမှာလည်း သတင်းပေးလားဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ မယုံကြည်မှုကို ခံနေရတယ်လို့ မြေပြင်သတင်းရ ယူနေသူတဦးကပြောပါတယ်.။
"လက်ရှိအခြေအနေက ၂ခုရှိတာပေါ့။ ကျနော်တို့က အာဏာပိုင်ကိုလည်းရှောင်ရတယ်။ ပစ္စည်းပစ္စယ နောက်ဆုံးဖုန်း ပါတယ်ဆိုရင်တောင်မှဘဲ ဖုန်းကိုယူစစ်တာမျိုးကိုကျနော်တို့စိုးရိမ်နေရတယ်။ ဒီမှာက သတင်းသမားမှ မဟုတ်တော့ဘူး။ ပြည်သူပြည်သားတွေပါ အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံနေရတယ် သူတို့ကမထင်ရင်မထင်သလို အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ နောက်တခုကလည်းဆန္ဒပြတဲ့သူတွေက ကိုယ်နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သူ ပါရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ ကိုယ်နဲ့မသိဘဲ မျက်နှာစိမ်းထဲသတင်းသွားယူရရင်တော့ ဒလန် ဆိုပြီးထင်တာတွေ နောက်ပြီးတော့စစ်လားဆေးလားတွေ ကြုံရနိုင်တယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အခြေအနေတခုမှာကြုံ ခဲ့ရတယ်"
အင်တာနက်တွေကို ကန့်သတ်တာ၊ ပိတ်ပင်တာတွေကြောင့်လည်း သတင်းစီးဆင်းမှု ရပ်တန့်တော့မယ့် အခြေအနေနဲ့လည်းကြုံနေရပြီး သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အဆိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
"သတင်းစီးဆင်းမှုနှောင့်နှေးတာက ကောလဟာလ အားကောင်းလာတယ်။ ပြည်သူကြားမှာ အရင်က အင်တာနက် လွယ်လွယ်သုံးနိုင်တုန်းကတောင် ကျနော်တို့က သတင်းမှားတွေ သတင်းတုတွေကို ရင်ဆိုင်ရတယ်။ ခုအင်တာနက်ကို တော်တော်ရှားရှားပါးပါးသုံးနေရတော့ နောက်ပြီး ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာတွေလည်းအားလုံးနီးပါးရပ်တော့ နောက်တခြားရုပ်သံမီဒီယာတွေလည်းရပ်တော့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်နေရတယ်။ သတင်းစီးဆင်းမှုကတော်တော်လေးအားနည်းလာတယ်။ ကောလဟာလကြုံရတယ်။ ဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာအမှား ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်လာတယ်။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ပြောရမယ်။ လက်ရှိသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာလဲဘာမှမရှိတော့ဘူး"
ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်တဲ့ ဒီကနေ့မှာ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပို့နဲ့ ဖမ်းဆီးခံ သတင်းသမားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လူငယ်တွေက အွန်လိုင်းကမ်ပိန်းတွေ ပြုလုပ်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နောက်ပိုင်း ဖမ်းဆီးခံရပြီး ခုချိန်ထိ ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ သတင်းသမား ၅၀ နီးပါးရှိနေသလို နောက်ထပ် အယောက် ၂၀ နီးပါးလည်း ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်မှု အညွှန်းကိန်းဟာ ၂၀၂၀ ကထက် တဆင့်ကျဆင်းသွာပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ မှာ ၁၄၀ နေရာမှာရှိတယ်လို့ နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့ ဧပြီလကုန်ပိုင်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တုန်းက အနေအထားမျိုး ပြန်ရောက်သွားပြီလို့လည်း RSF ကပြောပါတယ်။
ဒီနမေ့လေ ၃ ရကျနဟေ့ာ ကမ်ဘာ့စာနယျဇငျးလှတျလပျခှငျ့နဖွေ့ဈပါတယျ။ စဈအာဏာသိမျး အုပျခြုပျနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ သတငျးနဲ့စာနယျဇငျးလှတျလပျခှငျ့ ကဆြငျးနတေယျလို့ သတငျးထောကျတှကေ ပွောပါတယျ။ သတငျးမီဒီယာလုပျငနျးတှကေို တားမွဈတာ၊ သတငျးထောကျတှကေို ဖမျးဆီးတရားစှဲမှုတှကွေားက သတငျးထောကျတှေ ခကျခကျခဲခဲ သတငျးရယူနကွေရတဲ့ အခွအေနေ ရနျကုနျက ပေးပို့ထားတာကို မခငျဖွူထှေးပွောပွပါမယျ။
ဒီမိုကရစေီလူ့ဘောငျမှာ သတငျးလှတျလပျခှငျ့ဟာ အခွခေံအုတျမွဈတခုဖွဈတယျလို့ ကမ်ဘာ့စာနယျဇငျး လှတျလပျခှငျ့ အထိမျးအမှတျအဖွဈ အမရေိကနျသံရုံးအပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ နိုငျငံခွားသံရုံးတှကေ ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့ကွပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနကေ့ စဈအာဏာသိမျးခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး အဖမျးခံခဲ့ရတဲ့ သတငျးထောကျ ၈၀ မှာ ၄၀ ကြျောက ဆကျလကျဖမျးဆီးခံနရေပွီး တရားစှဲဆိုခံနရေတယျလို့ သံတမာနျအဖှဲ့အစညျးပေါငျး ၂၀ နီးပါးရဲ့ စုပေါငျးကွညောခကျြထဲမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဖမျးဆီးထားတဲ့ သတငျးသမားတှအေားလုံးကို ပွနျလှတျပေးဖို့၊ အငျတာနကျကနျ့သတျမှုတှကေို ရပျတနျ့ဖို့ ဆကျသှယျရေးနဲ့သတငျးအခကျြအလကျလှတျလပျမှုကို စတငျပေးဖို့ သတငျးအခကျြအလကျပေးနတေဲ့ မီဒီယာကုမ်ပဏီတှေ လိုငျစငျရုတျသိမျးခံရ၊ ဝငျရောကျစီးနငျးရှာ ဖှခေံနရေတာ၊ မီဒီယာလုပျငနျးငယျအမြားစု ပိတျဖို့ ဖိအားပေးခံရတာတှကေို ရပျတနျ့ဖို့၊ မီဒီယာလှတျလပျခှငျ့ကို အာမခံခကျြရှိရှိပေးဖို့ ၊ သတငျးသမားတှေ လှတျလပျစှာသတငျးရယူခှငျ့ကိုအာမခံခကျြပေးဖို့ နိုငျငံခွားသံရုံးတှကေ စဈကောငျစီကို တောငျးဆိုထားကွပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးခဲ့ပွီး ၃ လကြျောလာခြိနျအတှငျး လုပျငနျးလုပျပိုငျခှငျ့ ရပျလိုကျတဲ့ သတငျးလုပျငနျး ၆ ခုရှိပါပွီ။ မဇ်ဈိမ၊ DVB၊7Days၊ Myanmar Now နဲ့ ခတျေသဈ မီဒီယာလုပျငနျးတှကေို အာဏာသိမျးပွီး မကွာခငျမှာ လုပျငနျးလုပျခှငျ့ ပိတျသိမျးခဲ့သလို ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကပဲ မွဈကွီးနားမွို့အခွစေိုကျ မွဈကွီးနားသတငျးဂြာနယျတိုကျကိုလညျး လုပျငနျးထုတျဝခှေငျ့ ပိတျသိမျးလိုကျပါတယျ။
ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာနက ဧပွီ ၂၉ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျခကျြမှာ မီဒီယာတခုခု၊ နညျးပညာတရပျရပျသုံးပွီး သတငျး မထုတျပွနျရဆိုပွီး ဖျောပွထားပါတယျ။ အစောပိုငျးက အပိတျခံခဲ့ရတဲ့ သတငျးမီဒီယာတခြို့ကတော့ အှနျလိုငျးနဲ့ ဂွိုလျတုဆကျသှယျရေးကို အသုံးပွုပွီး သတငျးတှကေို ဆကျလကျဖျောပွနကွေပါတယျ။
စဈအာဏာသိမျးခဲ့ပွီးနောကျ သတငျးသမားတှကေို လုံခွုံရေးတှဖေကျက ပဈမှတျထားလာတဲ့အတှကျ အရငျကလို ပျေါပျေါထငျထငျ သတငျးရိုကျကူး ရယူနိုငျဖို့ မလှယျတဲ့အပွငျ လကျကိုငျ တယျလီဖုနျးနဲ့တောငျ ရိုကျကူးနိုငျဖို့ အဆငျမပွဘေူးလို့ သတငျးထောကျတှကေ ပွောပါတယျ။
အဖမျးခံရနိုငျတဲ့ အခွအေနကွေားမှာ သတငျးယူနကွေရတယျလို့ လတျတလောကပဲ ထုတျဝေ ခှငျ့ပိတျခံရတဲ့ မွဈကွီးနား သတငျးဂြာနယျက သတငျးထောကျတယောကျက ပွောပါတယျ။
"လှတျလပျစှာပွောဆိုခှငျ့ လှတျလပျစှာသတငျးရယူခှငျ့ဆိုတာက ဒါကဒုတိယအပိုငျးဖွဈသှားပွီ။ အခုအရေးကွီး တာက ဒီအပိုငျးမဟုတျတော့ဘူး။ ခုကသတငျးထောကျတှရေဲ့လုံခွုံရေးနဲ့ သူတို့မိသားစုလုံခွုံရေးရယျဖွဈနတောပေါ့ နျော။ ခုကဘယျလောကျဆိုးနလေဲဆို ကနြျောတို့သတငျးထောကျတှကေို ထောငျခွောကျဆငျဖမျးတာ၊ အိမျထိအရပျ ဝတျတှနေဲ့ လာဆှဲတာ. သူတို့ကိုမတှရေ့ငျမိသားစုဝငျတှကေိုဆှဲသှားတာ တှကေ လှတျလပျခှငျ့မရှိဘူးလို့ ပွောစရာမလို တဲ့အပိုငျးဖွဈသှားပွီ"
သူတို့ရဲ့မွဈကွီးနား သတငျးဂြာနယျတိုကျ အပါအဝငျ သတငျးမီဒီယာတှအေပျေါ ဖိနှိပျနတောက လကျရှိမွနျမာနိုငျငံရဲ့ သတငျးမီဒီယာလှတျလပျခှငျ့ကို မီးမောငျးထိုးပွတာဖွဈတယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။
" အခုလိုပိတျသိမျးလိုကျတာကိုလညျး မတရားဘူးလို့ ကနြျောတို့ခံစားရတယျ။ ကနြျောတို့ဟာမမြှတဘူး ကနြျောတို့ကို ဘာသတိပေးခကျြမှမပေးဘူး။ ခကျြခငျြးဘဲ ထုတျဝခှေငျ့ပိတျတာဘဲပို့တယျ။ သူတို့ဘယျလောကျဘဲ ပိတျသိမျး ကနြျောတို့က ပွညျသူတှအေတှကျ အလုပျကောငျးကောငျးလုပျပေးနိုငျခဲ့လို့ သူတို့ကနြျောတို့ကို ကွောကျလို့ကနြျောတို့ ကိုပိတျတယျလို့ထငျတယျ။ အဲအတှကျကနြျောတို့ ဂုဏျယူတယျ "
လုပျငနျးလုပျခှငျ့ကို စဈကောငျစီက မပိတျခငျရကျပိုငျးကလညျး မွဈကွီးနားဂြာနယျက သတငျးထောကျ ၃ ဦးကို အတငျးအကပျြ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရပွီး စဈဆေးမေးမွနျးခံခဲ့ရပါတယျ။ သူတို့တှကေို တခွားသတငျးထောကျတှလေိုဘဲ တပျမတျောပွိုကှဲအောငျ လှုံ့ဆျောမှု၊ လုပျဆောငျမှုတို့ ပုဒျမ ၅၀၅-က နဲ့ တရားစှဲထားပါတယျ။
သတငျးထောကျတှအေနနေဲ့ လုံခွုံရေး စိုးရိမျစရာဖွဈလာတဲ့အတှကျ သတငျးထောကျအမြားအပွားဟာ ဆကျလကျသတငျးရယူရေးသားဖို့အတှကျ လြှို့ဝှကျလုပျကိုငျ နရေပါတယျ။ ပွညျသူတှကွေား သှားရောကျ သတငျးရယူတဲ့အခါမှာလညျး သတငျးပေးလားဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ မယုံကွညျမှုကို ခံနရေတယျလို့ မွပွေငျသတငျးရ ယူနသေူတဦးကပွောပါတယျ.။
"လကျရှိအခွအေနကေ ၂ခုရှိတာပေါ့။ ကနြျောတို့က အာဏာပိုငျကိုလညျးရှောငျရတယျ။ ပစ်စညျးပစ်စယ နောကျဆုံးဖုနျး ပါတယျဆိုရငျတောငျမှဘဲ ဖုနျးကိုယူစဈတာမြိုးကိုကနြျောတို့စိုးရိမျနရေတယျ။ ဒီမှာက သတငျးသမားမှ မဟုတျတော့ဘူး။ ပွညျသူပွညျသားတှပေါ အသကျအန်တရာယျနဲ့ ကွုံနရေတယျ သူတို့ကမထငျရငျမထငျသလို အခွအေနဖွေဈနတေယျ။ နောကျတခုကလညျးဆန်ဒပွတဲ့သူတှကေ ကိုယျနဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးတဲ့သူ ပါရငျတော့ ကိစ်စမရှိဘူးပေါ့။ ကိုယျနဲ့မသိဘဲ မကျြနှာစိမျးထဲသတငျးသှားယူရရငျတော့ ဒလနျ ဆိုပွီးထငျတာတှေ နောကျပွီးတော့စဈလားဆေးလားတှေ ကွုံရနိုငျတယျ။ ကနြျောကိုယျတိုငျလဲ အခွအေနတေခုမှာကွုံ ခဲ့ရတယျ"
အငျတာနကျတှကေို ကနျ့သတျတာ၊ ပိတျပငျတာတှကွေောငျ့လညျး သတငျးစီးဆငျးမှု ရပျတနျ့တော့မယျ့ အခွအေနနေဲ့လညျးကွုံနရေပွီး သတငျးမီဒီယာ လှတျလပျခှငျ့ဟာ အဆိုးဆုံးအခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျလို့ သူကပွောပါတယျ။
"သတငျးစီးဆငျးမှုနှောငျ့နှေးတာက ကောလဟာလ အားကောငျးလာတယျ။ ပွညျသူကွားမှာ အရငျက အငျတာနကျ လှယျလှယျသုံးနိုငျတုနျးကတောငျ ကနြျောတို့က သတငျးမှားတှေ သတငျးတုတှကေို ရငျဆိုငျရတယျ။ ခုအငျတာနကျကို တျောတျောရှားရှားပါးပါးသုံးနရေတော့ နောကျပွီး ပုဂ်ဂလိက မီဒီယာတှလေညျးအားလုံးနီးပါးရပျတော့ နောကျတခွားရုပျသံမီဒီယာတှလေညျးရပျတော့ ခိုးကွောငျခိုးဝှကျကွညျ့နရေတယျ။ သတငျးစီးဆငျးမှုကတျောတျောလေးအားနညျးလာတယျ။ ကောလဟာလကွုံရတယျ။ ဘယျဟာအမှနျဘယျဟာအမှား ဆုံးဖွတျဖို့ခကျလာတယျ။ အဆိုးဆုံးအခွအေနရေောကျနတေယျလို့ပွောရမယျ။ လကျရှိသတငျးမီဒီယာလှတျလပျခှငျ့ဆိုတာလဲဘာမှမရှိတော့ဘူး"
ကမ်ဘာ့စာနယျဇငျးလှတျလပျခှငျ့နဖွေ့ဈတဲ့ ဒီကနမှေ့ာ သတငျးမီဒီယာလှတျလပျခှငျ့ပေးပို့နဲ့ ဖမျးဆီးခံ သတငျးသမားတှကေို ပွနျလှတျပေးဖို့ လူငယျတှကေ အှနျလိုငျးကမျပိနျးတှေ ပွုလုပျတောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
စဈအာဏာသိမျးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျနောကျပိုငျး ဖမျးဆီးခံရပွီး ခုခြိနျထိ ဆကျလကျဖမျးဆီးခံနရေတဲ့ သတငျးသမား ၅၀ နီးပါးရှိနသေလို နောကျထပျ အယောကျ ၂၀ နီးပါးလညျး ဖမျးဝရမျးထုတျခံထားရပါတယျ။ ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှကျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ သတငျးလှတျလပျမှု အညှနျးကိနျးဟာ ၂၀၂၀ ကထကျ တဆငျ့ကဆြငျးသှာပွီး နိုငျငံပေါငျး ၁၈၀ မှာ ၁၄၀ နရောမှာရှိတယျလို့ နယျစညျးမခွားသတငျးထောကျမြားအဖှဲ့ RSF ရဲ့ ဧပွီလကုနျပိုငျးက ထုတျပွနျတဲ့ အစီရငျခံစာမှာဖျောပွထားပါတယျ။ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံရဲ့ သတငျးလှတျလပျခှငျ့က လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈတုနျးက အနအေထားမြိုး ပွနျရောကျသှားပွီလို့လညျး RSF ကပွောပါတယျ။